Ilay Mpizahatany Vaovao: Mitady tanjona rehefa misokatra indray izao tontolo izao
Janoary 24, 2022 0 Namaky 7 aho
Ny areti-mifindra dia nanova betsaka tamin'ny fiainana andavanandro, manomboka amin'ny fomba fandehanan'ny olona any am-piasana sy any an-tsekoly ka hatramin'ny fomba fiantsenany sy ny fiaraha-monina. Na dia hanjavona amin'ny farany aza ny fitondran-tena sasany amin'ity vanim-potoana ity, ny COVID-19 dia nanao marika tsy azo kosehina teo amin'ny fiainana — sy ny dia — araka ny fantatsika.
Entin'ny Motivations samihafa
Mandroso, ny trano fandraisam-bahiny ny indostria dia hahatsapa ny fiantraikan'ny fomba niovan'ny mpanjifa ifotony amin'izay tadiaviny sy amin'ny fitondran-tenany sy ny fifandraisany amin'ny marika.
Raha tokony hifantoka amin'ny vidiny sy ny kalitao amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fividianana, ireo mpandeha vaovao ireo dia voatosika hividy amin'ny toe-javatra misy ny fahasalamana sy ny fiarovana, ny fahamoram-po sy ny fanamorana, ny fikarakarana, ny fahatokisana ary ny laza.
Raha ny marina, ny 44% amin'ny mpanjifa amerikana dia nilaza fa ny valan'aretina dia nahatonga azy ireo handinika indray ny tanjony manokana ary handinika indray ny zava-dehibe amin'ny fiainana, araka ny fikarohana nataon'ny Accenture vao haingana. Io fanadihadiana io ihany dia manambara fa ny 49% dia maniry ny orinasa hahatakatra ny fiovan'ny filany mandritra ny fanakorontanana sy hamahana ireo filàna ireo.
Ankoatra izany, ny 38% dia manantena fa ny marika dia handray andraikitra bebe kokoa amin'ny fanentanana azy ireo sy hahatonga azy ireo hahatsiaro ho manan-danja fa tsy hanao ny asany fotsiny.
Raha ny hotely no resahina manokana, ireo mpandeha vaovao dia mametraka premium amin'ny tontolo azo antoka sy madio, politikam-pamandrihana mora sy tsy misy sazy, serivisy mpanjifa mety, vokatra maharitra, ary fiantraikany ara-tsosialy tsara.
Maro no milaza fa vonona ny handoa vola fanampiny amin'ireo safidy ireo izy ireo ary hifindra any amin'ny mpamatsy fitsangatsanganana hafa (trano fandraisam-bahiny, zotram-piaramanidina, masoivoho fitsangatsanganana, ary OTA) raha ilaina. Raha ny marina, ny 45% amin'ny mpanjifa dia milaza fa mieritreritra ny hiala amin'ny mpanome fitsangatsanganana ampiasainy izy ireo, na manontolo na ampahany, mandritra ny enim-bolana ka hatramin'ny herintaona.
Ny firongatry ny mpanao fialam-boly vaovao
Ireo mpanao fialam-boly miaraka amin'ireo antony manosika vaovao ireo dia ho hery lehibe mitarika ny fitakiana fitsangatsanganana amin'ny taona 2022 - fiovana miavaka izay nanomboka tamin'ny taon-dasa taorian'ny taona maro nanaovana fitsangatsanganana ara-barotra no fototry ny indostrian'ny fitsangatsanganana manerantany.
Miaraka amin'ny politikam-pivezivezena ataon'ny orinasa izay mbola mikorontana, ny fitsangatsanganana fialam-boly dia hitohy haingana kokoa amin'ny 2022, mitondra ny tontolon'ny fitakiana hotely. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Kalibri Labs, nandritra ny taona 2022 dia hiverina amin'ny ambaratonga 2019 ny fandaniana hotely fialamboly, fa ny fitsangatsanganana ara-barotra kosa dia hiady mafy hahatratra 80% amin'ny ambaratonga 2019. Midika izany fa ny ampahany amin'ny fandaniana amin'ny hotely amin'ny karazana fitsangatsanganana dia hitohy hivadika alohan'ny areti-mifindra; tamin'ny 2019 fitsangatsanganana ara-barotra dia nahaforona 52.5% amin'ny fidiram-bolan'ny efitrano indostrialy ary amin'ny 2022 dia vinavinaina ho 43.6%.24 Raha ny marina, ny vinavina dia ny fahavaratry ny taona 2022 no ho iray amin'ireo matanjaka indrindra amin'ny fitsangatsanganana fialamboly.
Ny modely fandraharahana amin'ny hotely maro dia nifantoka voalohany indrindra tamin'ny filan'ny mpanjifa toy ny fisakafoanana eny an-toerana, ny fanasan-damba, ny toeram-panatanjahantena ary ny ivon-toeram-piasana. Ny fampitaovana andrasan'ny mpanao fialam-boly, toy ny spa, dobo, na fitaterana mora mankany amin'ireo toerana fizahan-tany ambony, dia matetika no ifantohan'ny faharoa.
Noho izany, ireo hotely ireo dia mila manao fanovana ara-drafitra amin'ny fomba mahasarika azy,
manova, ary mitazona mpanjifa fialam-boly.
Raha ampitahaina amin'ny mpanao dia lavitra, ny mpanao fialam-boly dia mila tari-dalana bebe kokoa amin'ny fizotran'ny famandrihana sy fampahalalana bebe kokoa momba ny toerana haleha. Mividy tena hafa noho ny mpanao dia lavitra izy ireo. Tsy dia mikasika ny zavatra manokana sy ny fanamorana izany fa ny amin'ny fanampiana tolotra an-tongotra aorian'ny famandrihana voalohany amin'ny toe-tsaina mahita sy mampientam-po. Ny fanaterana ho an'ny mpanao fialam-boly dia ho zava-dehibe kokoa satria ho betsaka kokoa izy ireo amin'ny taona 2022.
Ny endrika vaovaon'ny mpanao dia lavitra
Na dia hihemotra aza ny fitakiana fitsangatsanganana ara-barotra, dia tsy zavatra taloha izany, araka ny filazan'ny sasany. Marina indrindra izany any Etazonia, toerana fitsangatsanganana ara-barotra malaza indrindra eran-tany.28 Ny fitsangatsanganana ara-barotra amin'ny ankapobeny dia antenaina hitombo amin'ny taona 2022 raha oharina amin'ny taona lasa, ary, araka ny fanadihadiana nataon'ny Kalibri Labs, amin'ny Q3 dia tombanana hahatratra 80 izany. % amin'ny tarehimarika 2019 Na dia tsy antenaina aza ny fanarenana tanteraka raha tsy amin'ny 29, ny fitsangatsanganana ara-barotra eran-tany dia vinavinaina hiakatra 2024% amin'ny 14, miaraka amin'i Etazonia sy i Shina izay mahita ny fiakarana lehibe indrindra — izy roa dia vinavinaina hitombo 2022%
Miaraka amin'ny fidinan'ny orinasa lehibe mitantana - ary azo inoana fa tsy hiverina toy ny taloha intsony ny krizy - ny orinasa madinika sy salantsalany (SME) dia hitarika amin'ny fanarenana ny fitsangatsanganana ara-barotra amin'ny 2022. Mitohy ny fironana nanomboka tamin'ny taona 2020. Nihena ny habetsahan'ny fitsangatsanganana an'ny SME saingy tsy nitovy tamin'ny fitsangatsanganana ara-barotra hafa nandritra ny fihanaky ny valan'aretina.
Ireo mpitarika manerana ny trano fandraisam-bahiny, zotram-piaramanidina, mpamatsy fiara manofa fiara, ary orinasam-pitantanana fitsangatsanganana dia nilaza fa niverina haingana ny kaontiny SME tamin'ny taona 2020 ary mbola manohy ny fahombiazan'ny orinasa ankehitriny. Nolazain'izy ireo izany fa ny orinasa madinika dia nanomboka niverina haingana kokoa tao amin'ny birao, ary anisan'izany, nametraka ny olony teny an-dalana haingana kokoa. Mino ihany koa izy ireo fa ny fitsangatsanganana SME dia tohanan'ny fameperana fitsangatsanganana vitsy kokoa sy ny politika fitsangatsanganana mora kokoa. Ireo mpitarika ireo dia mahita fitomboana fitakiana avy amin'ireo masoivoho mpanolo-tsaina kely kokoa, orinasa mpanao lalàna sy kaonty ary mpivarotra, ary manantena ny hitovy bebe kokoa amin'ny taona 2022.
Ny sehatry ny SME dia maneho fahafahana ambony ho an'ny trano fandraisam-bahiny mba hamenoana ny fibodoana amin'ny tapaky ny herinandro ary handanjalanja ny lamina fitakiana fialam-boly efa andrasana. Tsena iray tsy voavolavola io—izay matetika nopotehin'ny ampahany lehibe indrindra nifampiraharaha tamin'ny orinasa. Ho an'ny hotely hanararaotra tanteraka an'io fahafahana io, dia zava-dehibe ny mametraka fifandraisana amin'ireo ho avy ary hahatakatra ny filan'ity fizarana ity. Ny hafainganam-pandeha sy ny fanamorana dia azo inoana fa mbola ho zava-dehibe, fa ny mpandraharaha mpandraharaha SME dia azo antoka fa hifantoka amin'ny olana ara-pahasalamana sy fiarovana bebe kokoa noho ny teo aloha.
Segments mpitsangatsangana vao jerena hojerena
Ny fahatongavan'ny asa lavitra nandritra ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra — sy ny fanohizana azy hatramin'ny namoronan'ny orinasa ny tontolon'ny asa mora azo noho ny filana — dia nahatonga ny firongatry ny fizarana mpitety faritany vaovao izay mampifangaro ny tombontsoan'ny orinasa sy ny fialam-boly.
Ny fitsangatsanganana mahafinaritra - izay iarahan'ny mpandeha an-tongotra sy ny fitsangatsanganana ara-barotra - dia antsoina hoe fametahana volafotsy. Na dia tsy vaovao aza ireo fandaharana ireo, dia mahazatra kokoa amin'ireo mpandeha lavitra kokoa talohan'ny areti-mifindra.
Amin'izao fotoana izao, ny dia bleisure dia mahazatra kokoa amin'ireo mpanao dia lavitra manerana ny vondrona demografika. Raha ny marina, ny fandinihana iray tamin'ny 2021 momba ny mpanao dia lavitra eran-tany dia nahita fa 89% no te-hanampy fialantsasatra manokana amin'ny diany ara-barotra ao anatin'ny roa ambin'ny folo volana ho avy.
Misy manam-pahaizana manokana momba ny fitsangatsanganana mihevitra fa ny fitsangatsanganana amin'ny sidina mankany amin'ny fihaonana sy ny fitsangatsanganana an-dalamby avy any amin'ny fivoriana dia ho lasa zavatra taloha ary ny fitsangatsanganana mandritra ny andro maromaro dia ho lasa "dia ara-barotra vaovao."
Ity fiovana ity dia azo atao satria ny orinasa dia mandefitra amin'ny karazana fitsangatsanganana ara-barotra toy izany.
Ireo mpifindrafindra monina nomerika - ireo olona manana fahafaha-manao miasa na aiza na aiza ary mandeha eny an-dalana - dia mitombo ihany koa. Izy ireo dia maneho ny famerenana lalina ny dynamic nentim-paharazana eo amin'ny asa sy ny dia, izay nisy ny olona niasa
mandeha na mandeha miasa. Ireo mpifindrafindra monina nomerika dia mandeha mandritra ny asany, mijanona amin'ny toerana samihafa ary mijanona mandritra ny fotoana tiany, ary avy eo mandroso. Ny fisian'ny fifandraisana no hany zavatra mametra ny safidiny dia. Notaterin'i Skift fa Amerikana 3.7 tapitrisa no mety hipetraka sy hiasa ho mpifindrafindra monina nomerika. Raha ny fizarana niche amin'izao fotoana izao, ny fanadihadiana momba ny tsena dia manoro hevitra fa hitombo haingana sy matanjaka izy io.
Mety hanantena ihany koa ny fanjavozavo ireo fizarana ireo isika satria ny traikefan'ny mpandeha an-tongotra dia manosika azy ireo amin'ny fomba fiasa maharitra kokoa amin'ny fomba fiasa nomerika nomad.
TEKNOLOJIA HO jerentsika
Ny teknolojia dia mitana anjara toerana lehibe kokoa amin'ny fanaovana izay ahafahan'ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny mamaly ny filàn'ny mpandeha sy ny zavatra tiany. Niaraka tamin'ny OracleHospitality izahay mba hahatakatra ny fironana teknolojia lehibe indrindra antenaina amin'ny taona 2022 sy any aoriana
Ny fitazonana azy olombelona amin'ny teknolojia. Haharitra ny fanamboarana ny teknolojia
mitsambikina hafa, miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny mampiasa teknolojia nomerika mba hanamaivanana ny enta-mavesatra sy ny asa
fanampiny, manome fahafaham-po ny vahiny tsirairay amin'ny traikefa vahiny vaovao. Anisan'izany ny
ny zava-drehetra avy amin'ny safidy sakafo sy zava-pisotro ho an'ny isam-batan'olona ary ny fisavana azo atao ary
fotoana hivoahana amin'ny fanitarana ny bandwidth efitrano ho an'ny fizarana mpandeha rehetra. Na dia fantatra indrindra amin'ny serivisy voafaritry ny fikitihana manokana aza ny trano fandraisam-bahiny, ny trano fandraisam-bahiny amin'ny karazany rehetra dia hampiasa fitaovana teknolojia bebe kokoa izay manampy azy ireo "hahazo fahalalana", manatsara tsikelikely ny traikefan'ny vahiny ary mihaona na mihoatra ny fenitry ny serivisy napetraka.
Famerenana ny dian'ny vahiny sy ny mpiasa. Mahazo alalana ny fitaovana enti-miasa
vahiny mba hivezivezy amin'ny ankamaroan'ny dian'ny vahiny - manomboka amin'ny famandrihana mankany
checkout-tsy mila mifandray mivantana amin'ny mpiasa. Vokany, mpiasan’ny hotely
dia mandany fotoana kely amin'ny asa, toy ny fanodinana ny fidirana, ary afaka manenjika
hetsika izay mety hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny serivisy mpanjifa.
Manova vahaolana teknolojia an-trano. Nandritra ny taona maro, ny rojo hotely lehibe kokoa dia nanana ekipa an-trano namolavola ny fitantanana ny fananany manokana sy ny famandrihana afovoany
rafitra. Saingy ny tsy fahampian'ny fampidirana, ny olana momba ny fifanarahana ary ny olana momba ny fanarahan-dalàna -
miaraka amin'ny sandan'ny fitazonana ireo vahaolana ireo ho manan-danja sy haingana — miteraka fanamby
ho an'ny ekipa an-trano. Miaraka amin'ny vondrona hotely maro nanamboatra indray nandritra ny areti-mifindra, ary
fifantohana manerana ny indostria amin'ny fanarenana sy ny fitomboana, trano fandraisam-bahiny maro kokoa no hifindra avy amin'ny fitaovana an-trano mankany amin'ny tolotra "eny ivelany" avy amin'ireo mpivarotra indostrialy. Ity fanovana ity dia tsy hampihena ny vidin'ny fampandehanana fotsiny, fa hanatsara ny tolotra tolotra ho an'ny mpiasa sy ny vahiny.
Manitatra ny fampiasana PMS malazo. Ny rafitra fitantanana fananana (PMS) no foibe
ny hetsika hotely. Miaraka amin'ny fitomboana akaiky ny fampiharana izay "mihantona" amin'ny
Ny fampidirana PMS, haingana, tsotra ary mora na tsy misy vidiny dia ilaina amin'ny fanohizana
fanavaozana sy tontolo iainana ara-teknolojia mahomby. Tsy misy mpamatsy PMS afaka mahafeno ny
takian'ny hotely tsirairay. Vokatr'izany, ireo mpandraharaha amin'ny hotely dia hitodika hatrany amin'ny vahaolana PMS izay manana tambajotra mitombo amin'ny mpiara-miombon'antoka izay manolotra fahaiza-manao miitatra.
Sary 5 – Mitodika any amin'ny Teknolojia ny trano fandraisam-bahiny mba hiomanana amin'ny ho avy
More on: Business | Fitetezam-barotra | teknolojia | Etazonia | Covid-19 | Shina | Accenture
IATA: Ady any Okraina sy Omicron no mandanja ny entana an'habakabaka Shina|
MTV Push Live: PortAventura World sy Paramount Spain dia miara-miasa hampiroborobo ny traikefa amin'ny fialam-boly Business|
Cunard dia mitatitra ny andro famandrihana be indrindra tao anatin'ny folo taona
Tonga any Cap Cana ny marika fanangonana Luxury. Playa Hotels & Resorts dia miara-miasa amin'ny Marriott International
Previous 2022 State of the Hotel Industry Report
Manaraka Mitaky evolisiona ny fanarenana ny dia vaovao